Nandràra ny tranonkala Toniziana Nawaat tamin’ny famoahana lahatsary ny YouTube · Global Voices teny Malagasy
Nandràra ny tranonkala Toniziana Nawaat tamin'ny famoahana lahatsary ny YouTube
Voadika ny 05 Marsa 2019 5:29 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, English
Nitatitra ny Tale Mpisolovava Sami Ben Gharbia, izay sady mpiara-manorina ny tranokalam-baovao Toniziana Nawaat fa tsy afaka namoaka lahatsary tao amin'ny YouTube intsony ny tranonkalany Nawaat, taorian'ny fanapaha-kevitry ny ekipan'ny YouTube fa nahitana “votoaty manohintohina” ny lahatsary izay nokasain'izy ireo halefa. Namoaka ny hafatra voarain'ny Nawaat i Ben Gharbia, izay mivaky toy izao:
Nofoanana noho ny fanitsakitsahana ny Torolalana ho an'ny Vondrom-piarahamonina YouTube ity lahatsary manaraka avy amin'ny kaontinao ity :
Tunise : enfants des zones défavorisées (Tonizia: ny ankizin'ny faritra mahantra) (Nawaat)
Na dia mety tsy rariny aza ny milaza fa tsy azo atao ny mampiseho lahatsary noho ny mety ho fanehoan-kevitry ny mpijery dia mametra ny votoaty izay manao fandranitana herisetra na mandrisika hetsika mampidi-doza sy tsy ara-dalàna izay mety hiteraka ratra ara-batana na fahafatesana izahay. Tsy mety ny mandefa lahatsary mampiseho zava-dratsy toy ny fanatsinontsinoavina ny biby, ny fidorohana zava-mahadomelina, ny fampisotroan-toaka sy ny fampifohana sigara ho an'ny ankizy tsy ampy taona, na ny fanamboarana baomba. Tokony hanabe na ho lahatsary fanadihadiana ny fandefasana lahatsary rehetra tahaka izany ary tsy tokony natao hanampiana na handrisihana ny hafa haka tahaka.
Ity no fampitandreman'ny torolalana ho an'ny vondrom-piarahamonina faharoa voarain'ny ny kaontinao tao anatin'ny enim-bolana. Noho izany, nesorina ny fahafahana mamoaka votoaty vaovao ao amin'ny YouTube avy amin'ity kaonty ity ary tsy hiverina raha tsy ao anatin'ny tapa-bolana aorian'ny fanekenao ity hafatra ity. Azafady mba avereno jerena ny Torolàlana ho an'ny Vondrom-piarahamonina YouTube ary tandremo ny fanitsakitsahana hafa, izay mety hanafoana tanteraka ny kaontinao.
Mampiseho ny andian'ankizy tanora Toniziana mifoka lakaoly sy miresaka momba ny fampiharana izany ny lahatsary izay resahana eto. Mahazatra any amin'ireo tanora sahirana ao Tonizia io fomba io ary heverina fa zava-mahadomelina mampidi-doza indrindra. Heverina ho lahatsary voalohany avy amin'ny olom-pirenena amin'ny fanadihadiana mikasika ny fampiharana izany any Tonizia ity lahatsary ity.
Nanamarika izy ao amin'ny lahatsoratr'i Ben Gharbia ao amin'ny Nawaat fa misy ny lahatsary hafa izay mety manitsakitsaka ny fitsipiky ny YouTube tokoa, anisan'izany ny iray malaza ratsy izay mampiseho ny fahafatesan'ilay Iraniana Neda Agha-Soltan sy ny maro hafa izay mampiseho ny fahafatesan'ilay mpifaninana Lalao Olaimpika Georgiana Nodar Kumaritashvili.
Manana politika mitovitovy amin'izany ihany koa ny tranonkala fifampizarana sary Flickr izay nahazo tsikera tamin'ny taona 2007 rehefa nitaraina ny mpaka sary Holandey Maarten Dors fa nesorina ny sariny izay nampiseho tovolahy Romaniana tanora iray nifoka sigara. Naverin'i Flickr tatỳ aoriana ny sary ary niala tsiny tamin'i Dors izy ireo.